FAQs - Chuliuxiang Catering Equipment Co., Ltd.
Onye nrụpụta OEM/ODM ọkachamara kemgbe 2013
Igwe ọkụ ọkụ dị elu
Ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ahụ na akaụntụ akụ anyị, Western Union ma ọ bụ PayPal:
Ee, anyị na-eji nkwakọ ngwaahịa mbupụ dị elu mgbe niile. Anyị na-ejikwa nkwakọ ihe egwu pụrụ iche maka ngwa ahịa dị ize ndụ yana ndị na-ebufe ebe nchekwa oyi kwadoro maka ihe ndị nwere mmetụta okpomọkụ. Ọkachamara nkwakọ ngwaahịa na ihe ndị na-abụghị ọkọlọtọ chọrọ nwere ike ibute ụgwọ ọzọ.
Nke 63, Yufeng Road, Kọmitii Agbata Obi Dongxing, Obodo Dongfeng.
Kedu ihe kpatara m ji agbaji igwe anaghị agba nchara?
Na 2020-07-31 17:28:10
Banyere grill bq na-enweghị anwụrụ ọkụ
Nnọọ ileta otu CLUX anyị
Nbanye akwụkwọ akụkọ
Debanye aha na akwụkwọ akụkọ anyị ka ị nweta akụkọ dị mkpa, onyinye dị ịtụnanya na n'ime scoops:
© Copyright 2011-2021 Chuliuxiang Catering Equipment Co., Ltd. Ikike niile echekwabara.